GOS-P1: Mikaroka ny loharano malalaka misokatra sy mitombo an'ny Google - Fizarana 1 | Avy amin'ny Linux
Tamin'ny lahatsoratra teo aloha dia naneho hevitra momba ny maha-zava-dehibe sy ny fanamafisana ny Loharano misokatra, izay mihanaka isan'andro tsy eo anelanelany ihany olona sy vondrom-piarahamonina (vondrona) fa eo anelanelany fikambanana miankina amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina.
Ary ao anatiny, dia manonona amin'ny fomba manokana isika ny Giants teknika 5 avy amin'ny vondrona fantatra amin'ny anarana hoe GAFAM. Izay samy manana ny rindrambaiko fitahirizam-bolan'ny tsirairay Loharano misokatra. Noho izany, amin'ity fandefasana voalohany hanomboka famerenana kely ny sasany amin'ireo rindranasa voarakitra ao izahay, manomboka amin'ny Loharano misokatra amin'ny Google.
Ho an'ireo liana amin'ny fikarohana ny lahatsoratra teo aloha mifandraika amin'ilay lohahevitra, azonao atao ny manindry ity rohy manaraka ity, rehefa avy namaky ity famoahana ity izao:
"Androany, ny orinasam-panjakana na ny tsy miankina dia samy mandroso miandalana amin'ny fampidirana bebe kokoa ny lozisialy maimaimpoana sy ny loharano misokatra ho an'ny maodelin'ny orinasa, ny sehatra, ny vokatra ary ny serivisy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny teknolojia malalaka sy malalaka dia ampahany lehibe amin'ny fomba fiasa ao anatiny sy ivelan'izy ireo, ho tombontsoan'ny tompony, ny mpanjifany na ny olom-pireneny." Source Source GAFAM: Giants teknolojia manohana ny Open Source
1 GOS-P1: Google Open Source - Fizarana 1
1.1 Fampiharana Google Open Source
GOS-P1: Google Open Source - Fizarana 1
Application of Loharano misokatra amin'ny Google
Abseil dia fanangonana kaody famakiam-boky loharano misokatra. Ny kaody C ++ an'i Abseil dia natao hampitomboana ny tranomboky C ++ mahazatra. Amin'ny tranga sasany, Abseil dia manome ampahany tsy hita ao amin'ny fenitra C ++; amin'ny hafa, Abseil dia manome safidy hafa amin'ny fenitra. Abseil dia tsy mihambo ho mpifaninana amin'ny kaody famakiam-boky mahazatra. jereo bebe kokoa amin'ny: Loharano misokatra amin'ny Google, GitHub y Web ofisialy.
AdaNet dia AutoML haingana sy malefaka miaraka amin'ny antoka momba ny fianarana. Izany hoe rafitra maivana TensorFlow maivana ho an'ny fianarana milina maodely avo lenta miaraka amin'ny fidirana an-tsehatry ny manam-pahaizana kely. Mampiasa ny algorithm AdaNet avy amin'ny «Cortes et al. 2017 »hianatra ny firafitry ny tamba-jotra neural ho toy ny andiana subnets mandritra ny fanomezana antoka momba ny fianarana. Zava-dehibe, AdaNet dia manome drafitra ankapobeny tsy ho an'ny fianarana ny maritrano ny tamba-jotra neural ihany, fa koa amin'ny fianarana ny fomba fanangonana modely tsara kokoa. jereo bebe kokoa amin'ny: Loharano misokatra amin'ny Google, GitHub y Rohy ofisialy.
Android dia Operating System ary lozisialy namboarina noforonina amina fitaovana maromaro manana endrika endrika samihafa, toy ny telefaona, takelaka, lamba entina (wearables), fahitalavitra, fiara ary fitaovana mifandray. Ny tanjon'i Android dia ny hamorona sehatra misokatra ho an'ny mpitatitra, OEM ary mpamorona hitondra ny heviny ary hanome vokatra mahomby amin'ny tontolo tena izy izay manatsara ny traikefa finday ho an'ireo mpampiasa. jereo bebe kokoa amin'ny: Loharano misokatra amin'ny Google, Loharano Google y Rohy ofisialy.
Angular dia rafitra fampiharana Internet ho an'ny finday, birao ary fitaovana web. Noho izany, sehatra fampandrosoana izy io izay mikendry ny hahatonga ny fampandrosoana ny tranonkala hahatsapa ho tsy misy ezaka, mifantoka amin'ny famokarana mpamokatra, hafainganam-pandeha ary azo hosedraina. Ny fampiharana namboarina miaraka amin'ny Angular dia azo apetraka amin'ny birao sy fitaovana finday toy ny tranokala sy ny rindranasa. jereo bebe kokoa amin'ny: Loharano misokatra amin'ny Google, GitHub y Web ofisialy.
Apache Beam dia modely natambatra ho famaritana sy fanatanterahana ny fantsom-pamokarana data. Raha atao teny hafa, dia manome maodely fandaharana mirindra mirindra, ahafahanao mampihatra asa fanodinana data sy streaming izay afaka mandeha amin'ny fotoana maharitra rehetra. Mora ampiasaina amin'ny Apache Apex, Apache Flink, Apache Spark, ary Google Cloud Dataflow, ankoatry ny backend processing hafa. Apache Beam dia novolavolaina tamin'ny teknolojia Google maromaro, toa ny MapReduce, FlumeJava, ary Millwheel. Google dia nanome ny kaody ho an'ny Apache Software Foundation tamin'ny 2016, ary ny Googlers dia manohy mandray anjara tsy tapaka amin'ny tetikasa. jereo bebe kokoa amin'ny: Loharano misokatra amin'ny Google, GitHub y Web ofisialy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ity fikarohana voalohany an'ny «Google Open Source», manolotra karazana fampiharana misokatra mahaliana sy maro karazana novolavolain'ny Technological Giant of «Google»; ary tena mahaliana sy mahasoa ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » GOS-P1: Mikaroka ny loharano malalaka misokatra sy mitombo an'ny Google - Fizarana 1